उच्च दक्ष कामदारको तलब कती सम्म हुन्छ ?
Wed, Feb 19, 2020 | 21:13:20 NST
सुरज थापा/ गोर्खा
प्रश्न : मैले सिभिल इन्जिनियरीङ पढेको छु । म संग कामको अनुभव भने छैन । मलाई रोजगारीका लागि खाडीको कुनै देश जान मन छ । म जस्ता मानीसको तलब कती सम्म हुन्छ ?
उत्तर : बलबहादुर तामाङ, पुर्व अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगर व्यवसायी संघ – तपाईं जस्ता मानीसको खाडी मुलुकमा बेसिक तलब ७५ हजार नेपाली रुपैया बराबर हुन्छ । कामको अनुभव पनि भए झनै राम्रो हुन्छ, राम्रो तलब सुबिधा पाउनु हुनेछ । खाडी मुलुकबाट उच्च दक्ष कामदारको धेरै माग आइराको हुन्छ । तलब सुबिधा पनि २ लाख नेपाली रुपैया बराबर हुन्छ ।